Sidee Loogu Kordhinayaa Xiriiriyaha Telegram? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sidee loogu daraa xiriir Telegram?
Waxaa laga yaabaa 1, 2021 0 comments 438
Codsiga Telegram wuxuu ku dhashay goob ku habboon in la diro oo loo helo farriimaha isla markiiba. Xilligan waxaa jira malaayiin dad ah kuwaas oo ku soo biiray shabakadan isgaarsiinta ee aan caadiga ahayn diiwanka ayaa si isa soo taraysa u sii kordhaya.
Maanta waxaan ku bari doonaa sida loogu daro xiriir Telegram iyo habka ugu macquulsan ee asxaabtaada looga dhex helo codsigan. Nasiib wanaag hanaanku waa mid fudud oo dhakhso badan. Waxaad u baahan doontaa oo keliya lambarka taleefanka ee qofka aad rabto inaad ku darto ama isticmaale-adeegsigooda.
Ku dar dadka liiska asxaabtaada
Habka loogu daro xiriiro cusub Telegram waa mid aad u fudud oo dhaqso badan. Users waxay leeyihiin fursado dhowr ah oo loogu daro dadka liiska asxaabtooda. Waxay si toos ah uga samayn karaan barnaamijka moobiilka ama sidoo kale nooca desktop-ka.
Labada xaaladoodba howshu ma qaadanayso daqiiqado badan. Way fududahay sida furitaanka arjiga, aadista qaybta "Xiriirada" oo qofka lagu daro oo aan jeclaan laheyn inaan ku qorno liiska saaxiibadeena.
Uma baahnid inaad ogaatid lambarka taleefanka dadka aad rabto inaad ku darto liiska xiriirka. Hadda waxaa jira ikhtiyaari ah in lagu helo dadka adoo adeegsanaya magaca isticmaalaha.
Laga soo bilaabo taleefannada gacanta
Mid ka mid ah hababka ugu dhaqsaha badan ee loogu daro xiriiriyeyaasha Telegram waa iyada oo loo marayo arjiga aan ku rakibnay moobilkeena. Kaliya waa inaad raacdaa dhowr talaabo oo fudud in aan hoos ku xusno:
Furan codsiga taleefankaaga gacanta
Guji saddexda sadar ee jiifka ah bidixda kore
Hadda dooro ikhtiyaarka "Xiriirrada"
Liiska oo dhameystiran oo ah xiriirada aad ku dartay ayaa soo muuqan doona. Ku dar mid cusub waa inaad ku qasabtaa ku dhaji calaamadda + oo ku yaal dhinaca hoose ee shaashadda dhinaca midigta.
Qor magaca qofka Maxaad ku dari doontaa (qasab) iyo magacyada qoyska (ikhtiyaar)
Muuji lambarka waddanka iyo lambarka taleefanka qofka lagu daro
Hadda waxa lagaa rabo oo dhan waa inaad sameysaa keydi macluumaadka waana taas
Waxaad ku dari kartaa oo keliya isticmaaleyaasha horay uga diiwaangashan barxadda, taasi waa, dadka leh barnaamijka rakibay oo leh koonto la abuuray.
Laga soo bilaabo kombuyutarka
Adiguba waad leedahay ikhtiyaarka ah inaad si toos ah ugu darto xiriirada nooca PC ee Telegram. Sameynta waa mid aad u fudud:
Furan barnaamijka lagu rakibay kombuyuutarka
dhagsii saddexda sadar ee jiifka ah
Guji xulashada "Xiriirrada"
Xulo “Kudar xiriir"
Muuji magaca hore, magaca dambe iyo lambarka taleefanka qofka aad isku dayeyso inaad ku darto liiska asxaabtaada.
Guji "Abuuri"waana diyaar.
Kudar xiriirada kujira Telegram lambar la'aan
Ma lihid lambarka qofka aad rabto inaad ku darto liiska asxaabtaada? Ha ka welwelin. Waxaa jirta dariiq lagu daro xiriirada adigoon ogeyn lambarka taleefanka ee qofkaas.
Waad ku dari kartaa dadka adoo garanaya kuwooda username:
Saxaafadda ku saabsan astaanta muraayada weyneynta
Baarka raadinta gal username qofka aad rabto inaad ku darto
Taabo isticmaaleha si aad u furto sheekada
Guji muuqaal sawir ee qofka
Xul saddexda qodob dhinaca midig ee shaashadda oo guji "Ku dar xiriirada"
1 Ku dar dadka liiska asxaabtaada
2 Laga soo bilaabo taleefannada gacanta
3 Laga soo bilaabo kombuyutarka
4 Kudar xiriirada kujira Telegram lambar la'aan
Sidee looga soo kabtaa xisaabteyda twitter-ka?
Sidee loo xiraa xisaabta twitter-ka?